Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Antoine Griezmann Oo Ku Biiri Kara Chelsea, Raheem Sterling Oo Bilaabay Heshiis Kordhin Man City Ah, Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga: Antoine Griezmann oo ku biiri kara Chelsea, Raheem Sterling oo bilaabay Heshiis kordhin Man city ah, iyo Qodobo kale
July 7, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Xiddiga Manchester City iyo England Raheem Sterling ayaa u furan dalabyo uu kaga tagayo kooxdiisa. Laakiin tababare Pep Guardiola ayaa doonaya 26 jirkaan garabka ka ciyaara inuu sii joogo Etihad Stadium, inkastoo ay xiiseyneyso Real Madrid . (theathletic)
Gareth Bale oo 31 jir ah ayaa laga yaabaa inuu ka fariisto kubada cagta marka qandaraaskiisa £ 600,000 ee asbuucii uu kula joogo Real Madrid uu dhaco xagaaga soo aadan. Waxaa jira warar badan oo ku saabsan mustaqbalka weeraryahanka Wales ka dib markii uu ka soo laabtay amaahdii uu ku joogay Tottenham . (Dailymail)
Arsenal ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay weeraryahanka Lyon Houssem Aouar, sida ay qortay Le10 Sport ,
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Kalvin Phillips, oo 25 jir ah, ayaa “ku faraxsan” joogitaanka Leeds United , mana doonayo inuu ka tago kooxda Elland Road, sida uu sheegay wakiilkiisa. (inews.co.uk)
Chelsea iyo Arsenal ayaa labaduba isha ku haya kooxda Bayer Leverkusen iyo laacibka reer Burkina Faso Edmond Tapsoba. Laakiin 22 jirkaan daafaca dhexe ka ciyaara ayaa u sheegay suxufiyiinta inaysan jirin wax la taaban karo, wax rasmi ah ma jiro iyo inuu xilli ciyaareedka ka bilaabayo kooxda Jarmalka. (Metro)
Lazio ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato Julian Brandt oo ka socda Borussia Dortmund, sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport.
Arsenal ayaa wali ku raad joogta daafaca Brighton Ben White oo 23 jir ah kadib markii ay dalab 50 milyan oo euro ah ka gudbisay xiddiga reer England. Si kastaba ha noqotee, soo jeedimaha la aqbalay waxaa lagu soo warramey inay yihiin ku aan jirin. (Brighton Argus)
Southampton ayaa kalsooni ku qabta inay amaah kula soo wareegto daafaca Manchester United Brandon Williams xilli ciyaareedka soo socda. Saints ayaa si aad ah u xiiseyneysay 20 jirkaan reer England xagaagii hore laakiin United ayaa ka caga jiideysay inay iska fasaxdo ka dib xilli ciyaareedkiisii ​​wacnaa. (dailymail)
Paris Saint-Germain ayaa dhameystirtay saxiixa daafaca buuxa ee kooxda Inter Achraf Hakimi. PSG
Barcelona ayaa siin doonta Chelsea fursad ay kula soo saxiixato weeraryahan Antoine Griezmann. Kooxda reer Catalonia ee lacagta ku liidata ayaa ku dhibtooneysa inay qandaraas cusub ka saxiixato Lionel Messi sidaas darteed waxay rajeyneysaa inay iska dirto 30 jirka reer France. (dailystar)
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Barcelona Joan Laporta ayaa sheegay in “wax walba ay si fiican ku socdaan”, in kasta oo qandaraaska Messi ee kooxda uu dhammaaday isla markaana 34 jirka uu noqday wakiil xor ah. (Marca)
Manchester United iyo Arsenal ayaa isha ku haya inay u dhaqaaqaan saxiixa daafaca dhexe ee kooxda Barcelona Samuel Umtiti. 27 jirkaan reer France kuma haboona qorshooyinka tababare Ronald Koeman. (dailystar)
Arsenal ayaa sidoo kale dalab ka gudbisay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lyon Houssem Aouar iyadoo kooxda reer France la rajeynayo inay ku dalbato 25 milyan ginni 23 jirkaan, kaasoo lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Gunners sannadkii hore. (Le10 Sport)
Liverpool ayaa diyaar u ah inay kula tartanto Manchester City tartanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Napoli iyo Poland Piotr Zielinski, oo 27 jir ah, kaasoo dhaliyay sideed gool islamarkaana caawiyay 10 kale kooxda Serie A xilli ciyaareedkii hore. (Calciomercato)
Tottenham ayaa sare u qaaday xiisaha ay u qabto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Miralem Pjanic. Dhowr kooxood, oo ay ku jiraan kooxdiisii ​​hore ee Juventus, ayaa xiiseynaya 31 jirkaan, kaasoo doonaya inuu mustaqbalkiisa si dhaqso ah u xaliyo. ( Sport Witness)